Qaramada Midoobay oo ka walaacsan xaaladda Muslimiinta Uighurs - BBC News Somali
Qaramada Midoobay oo ka walaacsan xaaladda Muslimiinta Uighurs
QM ayaa sheegaysa in Shiinuhu ku faquuq ku yaho bulshada Uighur
Qarammada Midoobay ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay wararka sheegaya in xarig baahsan lagula kacay Qawmiyadda Muslimiinta u badan ee Uighurs waxayna ku baaqday in lasii daayo dadka xidhan.
Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii guddi katirsan Qaramada midoobay ay dhagaysteen wararka sheegaya in ilaa hal milyan oo ah Qawmiyaddda Muslimiinta ah ee Uighurs ee ku dhaqan galbeedka gobolka Xinjiang, lagu hayo xarumo dhaqan celin ah.
Xukuumadda Beijing ayaa beenisay eedaymaha balse qiratay in qaar kamid ah dad xagjir diimeed ah loo hayo si loo dhaqan celiyo.
Shiinaha oo hawada u diray satellite isgaarsiinta mobileka
Shiinaha oo xadidaya ganacsiga Waqooyiga Kuuriya
Baaritaan la sameeyey horraantii bishaan, xubno katirsan gudiga Qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagga midab kala sooca iyo cunsiriyadda ayaa sheegay in warar lagu kalsoon yahay ay tilmaamayaan in xukuuumadda Beijing "ay gobolkaas ka dhigtay wax u eg xero ciidan".
Shiinaha ayaa ku jawaabay in Muslimiinta Uighurs ay haystaan xuquuq buuxda balse xukuumadda Beijing ayaa samaysay qirasho dhif ah " kuwa ay marin habaabisay xagjirnimada diintu … waxaa laga caawin doonaa dib u dajin iyo in loo sameeyo dhaqan celin"
Gudiga ayaa xukuumadda Beijing ugu baaqay:
In la joojiyo xadhiga aan loo marin dacwad, maxkmad iyo xukun
In si dag dag ah loo sii daayo dadka xidh xidhan
In lasoo gudbiyo tirada dadka xidhan iyo sababta ay u xidhan yihiin.
In la sameeyo baadhitaano la xiriira dhammaan eedaymaha ku aaddan isirka iyo diinta.
Kooxaha xuquuqda aadnaha oo ay kamid yihiin Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa ugudbiyey gudiga Qarmada midoobay caddaymo duuban oo la xiriira xadhiga baahsan ee lagu hayo qawmiyaddaan Muslimka ah, kuwaas oo lagu hayo xeryo dadka lagu khasbo in ay u hoggaansamaan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping
Maxaa la isugu khilaafay filimka ku saabsan xasuuqii masaajidka New Zealand?
Dagaal beeleedyada Dawlad Deegaanka Soomaalida ka dhaca oo kordhay
Ma laga yaabaa in xisbiga Dimuqraadigu uu tallaabo ka qaada Ilhaan Cumar?
Waayaha ku xeeran rejada 'Maayarnimo' ee Cabdikariin Axmed Mooge
11 Juunyo 2021
Ilhaan Cumar iyo xildhibaano Yuhuud ah oo ka tirsan Congreska oo foodda is daray
Maxay tahay sababta dalalka reer galbeedka uu ugu sii badanaya Islaam nacaybka?
Ninkii dharbaaxay Macron oo hadlay - Muxuu ficilkaas u sameeyay?
10 Juunyo 2021
'Dowladda iyo shacabka Kenya weli waa saaxiibada dhabta ah ee Soomaaliya'
"Waxaan leeyahay ma dooneeyno inaad ibsataan caruurteena"
'Geeridii baa albaaba noo taagan. Gaajada na foolkay dadka kaga taallaa'
Sida ay madaxweynayaasha Afrika wiilashooda xukunka ugu barbaariyaan
Aaabaha qoyska ugu ballaaran adduunka oo dhintay